UMarco Valerio Marcial, iklasikhi ebalulekileyo. Ezinye iipigrams | Uncwadi lwangoku
A UMarco Valerio Marcial Ndinayo enye Uvelwano olukhethekileyo. Unyaka wesibini wesidanga sam saseyunivesithi wandikhuthaza kakhulu, xa ndandifunda uF. Inglesa, ndandinako IsiLatini kwiikhosi ezimbini zokuqala enye ye abo abafundisi bamathambo ephawula ubomi bomfundi. Iipigramu zakhe zaziphezulu kakhulu Uncedo odlale unyaka wokuqala okanye Iikhathalogu yeCicero. Yena, uHoracio kunye no-Ovidio zezona mbongi zam zakudala ndizithandayo. Namhlanje Ndiyaqaqambisa ezinye zazo iipigrama yayiyeyona indalo yakhe inkulu.
1 UMarco Valerio Marcial
UMarco Valerio Marcial
Bilbilitan yokuzalwa (iCalatayud yangoku), malunga nonyaka D. C. waya eRoma bagqibe izifundo zabo zomthetho phantsi kokhuseleko lwe Seneca. Kodwa ukuwa kwakhe kubabalo kunye nokuzibulala kwakhe kwamrhuqela ezantsi. Yayibukeka ngale ndlela wanyanzelwa ukuba asinde ngendlela ye-bohemian njengomthengi wabathengi abahlukeneyo. Kodwa ukubuyisa wayenayo ubuhlobo yababhali ababalaseleyo belo xesha njenge UPliny Omncinci okanye i-satirical IJaji.
Wafumana ukuthandwa ngabalawuli babazalwana UTito noDomitian, awazinikezela kuye izincomo ezininzi kunye nomdla. Bamthiya igama ilungu le-oda yamahashe kwaye iphumelele iimbasa ezahlukeneyo, phakathi kwabo ukukhululwa kwirhafu ekufuneka ihlawule abo bangenabo abantwana. Kodwa okufanayo akwenzekanga ngoNerva noTrajano kwaye kwafuneka ndibuyele eBílbilis. Wabuya apho kubomi basemaphandleni, Elinye lawona maphupha akhe amnandi nalapho wazinikezela khona kwiindidi ezininzi.
Umsebenzi kaMarcial igcinwe isemgangathweni Ngethamsanqa. Kunye Iincwadi ezilishumi elinesihlanu zeevesiZizonke zimalunga nemibongo elishumi elinesihlanu kuhlobo olunye loncwadi, i epigram, apho kwakungekho mntu wayechasene naye ngexesha lakhe.
Ndikhetha ezimbalwa kwifayile ye- ubomi, ukufa kunye nobuhlobo, ukongeza kwezinye izinto ezithandabuzekayo, ezihlekisayo kunye nokugxekwa kwezentlalo ukongeza kwiintshaba okanye amabhongo. Kwaye ndigqibezela ngomnye wakhe elegies edume kakhulu.
Ukwazi ukonwabela iinkumbulo zobomi kukuphila kabini.
Ukuba uzuko luza emva kokufa, andikhawulezi.
Ndikholelwe, ayibobulumko ukuthi 'ndizakuphila' ngomso kusemva kakhulu: phila namhlanje.
Incwadi oyifundayo, yeFidentino, yeyam; Kodwa xa uyifunda ngokungalunganga, iqala ukuba yeyakho.
Kutheni ndingakuthumeli, Pontiliano, iincwadi zam ezincinci?
Ukuze wena, Pontiliano, ungandithumeli eyakho.
Nangona ungazipapashi izibongo zakho, uyayigxeka eyam, Lelio.
Nokuba uyeke ukugxeka eyam okanye uthumele eyakho.
Gcina indumiso yakho kubafi
Awunakuze uyixabise imbongi ephilayo.
Uxolo, ndikhetha ukuqhubeka nokuphila
ukufumana indumiso yakho.
I-Tais inamazinyo amnyama, iLecania imhlophe njengekhephu.
Sesiphi isizathu? Lo uthenge ezinye, ezakhe.
Lowo ukubiza ngokuba ukhohlakele uyaxoka, Zoilo.
Awuyiyo indoda ekhohlakeleyo, Zoilo, kodwa ngokuzikhethela.
Musa ukumangaliswa yiyo nantoni na eyalayo
isidlo sangokuhlwa esingamakhulu amathathu, uNestor:
Andikuthandi ukutya ndedwa.
Kude kube kutshanje ebengugqirha, ngoku uDiaulo ngumngcwabi;
into ayenzileyo njengomngcwabi wayenze nanjengugqirha.
Xa ikhoboka lakho libuhlungu iminga yakhe, wena, Nevolo, iesile lakho libuhlungu.
Andinguye umvumisi, kodwa ndiyayazi into oyenzayo.
Uneminga enkulu njengempumlo yakho,
ngalo lonke ixesha ingena kulwakhiwo, uyaliva.
U-Lesbia ufungela ukuba akazange athathwe simahla.
Yinyani. Xa efuna ukukhutshwa, uhlala ehlawula.
Kuwe uFronton noFlacila, abazali bakhe, le ntombazana ndiyinikela kuwe,
Ukuncipha okuncinci, yonwabela imilebe yam
kunye nolonwabo lwam, ukuze uloyiko lobumnyama bumnyama boyise
nakwimihlathi emikhulu yenja yaseTartar.
Ngewayelibonile iqhwa lobusika bakhe besithandathu bunyibilika,
awayehlala ngayo nenani leentsuku ezifanayo.
Oko phakathi kwabakhuseli abahloniphekileyo badlala kwaye baqhubeke ngonaphakade
ndithethe igama lam ngomlomo othintithayo.
Ingca e-Shaggy, musa ukuwagquma amathambo abo athambileyo ngonaphakade
Umhlaba, musa ukuba nzima: wayengekho kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UMarco Valerio Marcial, iklasikhi ebalulekileyo. Ezinye iipigrams